Naseho ny : 26 marsa 2020
26 marsa — I Masimbavy Larissa dia niaina tany amin'ny taonjato fahefatra. Martiry tany Crimée, tao amin'ny Fiangonana grika izany izy io tamin'ny taona 375.
Tamin'izany, namoaka didy ny mpanjaka goth, Athanaric mba handorana velona azy ireo satria raha nankalaza ny Eokaristia tao anaty lay iray i Larissa sy ireo namany, dia tonga tao ity mpanjaka, nitondra sampy ary niteny tamin'ireo mpino kristianina izay niaraka tamin'i Larissa fa hoe tsy maintsy miankohoka sy mitsaoka ilay sampy. Nisy ireo nanaiky noho ny tahotra ka tsy nokitihana, fa i Larissa sy ireo namany 26 kosa tsy nanaiky ka nodoram-belona. Tao aoriana kely dia nisy vadin'ny mpanjaka goth iray hafa, nantsoina hoe Gaatha, nanangona ny sisan-taolan'ireo martiry ireo ka nitondra azy nanka ny Syrie. Novonoina ho martiry ihany koa io vehivavy io.